ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးစတားများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; ''ဘက်စုံမစ္စတာ'' ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ အခုဆိုရင်ဘဲ, သောမတ်စ် Lemar အဆိုပါ 2017 နွေရာသီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ window ထဲမှာအပူဆုံးဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘ0အစပိုင်း
သောမတ်စ် Lemar ၏ကာရေးဘီးယန်းကျွန်းများတွင် 12 ၏ 1995th နိုဝင်ဘာလရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Baie-Mahault, Guadeloupeပြင်သစ်တစ်ဦးပိုင်နက်ဖြစ်၏။ Guadeloupe ပြင်သစ်သို့အနက်ရောင်ဘောလုံးခွက်ယူလာဘို့အသိသာတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ တူသောထင်ရှားတဲ့အမည်များ သီယာရီအွန်နရီ နှင့် Alexandre Lacazette လူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်းကနေသူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ရှိသည်။ သူတို့၏မိဘများအားလုံးပြင်သစ်အနောက်အင်ဒီး၏လိပ်ပြာ-shaped ကျွန်းထွက်ခွာပြင်သစ်မှရွှေ့ပြောင်း။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:relationship ဘဝ
စာအရေးအသား၏အချိန်တွင်မှာသောမတ်စ် Lemar သူ၏ဆကျဆံရေး status ကိုလူပျိုဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမ CONFIRM ကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ထွ-မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ဟောင်းမယားတို့ကိုလည်းမရှိကိုဆိုလိုသည်။ သူလည်းမဆိုကလေးတွေရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:Play ကို၏စတိုင်
Lemar ဗဟိုမှတဆင့်နှင့်အခမဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအတောင်ပေါ်မှာကစားအဖြစ်နိုင်မယ့်စွယ်စုံကွင်းလယ်လူသည်။ သူအများစုခြေ left, ဒါပေမယ့်လည်းလက်ျာခြေမနှင့်အတူအရည်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ့ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ dribbling ကျွမ်းကျင်မှု, ခိုင်မာတဲ့သွားတာစွမ်းရည်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကန်ဘောများအတွက်မှတ်ချက်ပြုသည်။ သူဟာလင့်ထားသည်-အထိအသင်းအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူမဟုတ်ဘဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်အပေါ်တာထက်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ပြောကြားခဲ့သည်: "ငါသည် duels ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သွားတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တတ်နိုင်သမျှအာရုံစူးစိုက်ရန်ကြိုးစားနေပါ၏။ "သူကမကြာခဏရှည်လျားသောအကွာအဝေးကနေဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားနှင့် 14-55 ရာသီအတွက် 2016 ပွဲအတွက် 17 ဂိုးသွင်းနှင့် 17 ကိုကူညီပေးနေခဲ့လိမ့်မယ်။
သူကသူ့ဦးခေါင်းကိုတက်နှင့်အတူကစားနှင့်သူ၏လက်ဝဲဘက်ခြေကျင်မှော်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါသည် - သူ dribbling နေဖြင့်ကစားသမားများရိုက်နှက်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်သူကအမှုအရာရှုပ်ထွေးကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှင့်ဘယ်တော့မှသူအတိုက်အခံရဲ့ထိခိုက်နစ်နာအသုံးပြုရသော 'passes တစ်ထိပ်တန်းအကွာအဝေးရှိပါတယ်။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
အဆိုပါ Caen လူငယ်စနစ်၏တစ်ဦးကထုတ်ကုန်, Lemar သြဂုတ်လ 2013 အတွက် 14 / 2013 ရာသီအဖွင့်ဂိမ်း၌သူ၏အကြီးတန်းပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
သူဟာဥရောပတစ်လွှားကနေအတိုးဆွဲဆောင်မီ, SMC များအတွက်စုစုပေါင်း 31 ပွဲလုပ်ဖို့အပေါ်သွား၏ - သူချယ်လ်ဆီးလွှဲပြောင်းကောလာဟလများ၏ဘာသာရပ်ကြီးလွန်းလီဗာပူးလ်, လိုင်ယွန်နှင့်ဘော်ဒိုးချိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့်သူ£ 3.4 သန်းမိုနာကိုမှတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့များအတွက်ရွေးချယ် 2015 ၌တည်၏။
သူ U17 ထံမှ U21 မှတိုင်းအဆင့်မှာပြင်သစ်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် 2016 ဆန့်ကျင်၌သူ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြီးတန်းပွဲဦးထွက်စေတော်မူပြီ အိုင်ဗရီကို့စ်.
Caen ကနေပြောင်းရွှေ့ကတည်းက 21 နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ရာထူးအမျိုးမျိုးအတွက်ကစားခဲ့သည်။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:လီဂူး 1 ဒိုင်းဆု
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko နှင့် Bernardo ဆေးလ်ဗားအချို့ကလည်းယင်းအနေဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းကို၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရတယ်ကြပေမည်။ သို့သော်မိုနာကိုအတွက် Lemar ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလီဂူး 1 အနိုင်ရနှင့်ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက်ရှိလျှော့တွက်လို့မရနိုင်ပါ။
သူကပြင်သစ်လိဂ်နောက်ဆုံးရာသီ (2017 / 2017) အနိုင်ရရန်သူ၏ကလပ်ဦးဆောင်နှင့်လမ်းအပေါ်မန်ချက်စတာစီးတီးနှင့်ဒေါ့မွန်တို့၏အကြိုက်ထွက်ခေါက်, ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:1 အားနည်းချက်, အတော်များများကအစွမ်းသတ္တိ
သူကတောင်ပံပေါ်ကစားသော်လည်း, မိမိအသင်း-အိမ်ထောင်ဖက်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Mendy နှင့်Mbappéအဖြစ်အရှိန်အဟုန်နှင့်အတူမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူကမလိုအပ်ပါဘူး။ Lemar တက်လင့်ထားသည်နှင့်တဦးတည်း-နှစ်ခု 'passes နှင့်အသုံးပြုမှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အာကာသကိုတက်ဖွင့်လှစ်ရန်သူ၏ပေးပို့များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
အဘယ်သူမျှမမိုနာကိုသည်လူ Lemar ထက် 2016 / 2017 ရာသီအတွက်ဂိမ်းနှုန်းကပိုအဓိကသော့ချက် 'passes (2.2) ကစား, သူသည်လည်းသူ့အဖွဲ့-အိမ်ထောင်ဖက်မဆိုထက် ပို. လက်ဝါးကပ်တိုင် (1.4) ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအလီဂူး 1 အတွက်မှန်မှန်ကစားသောသူတို့၏အမျိုးအထွက်, သာသပိတ်မှောက်ရွေးချယ်စရာဖယ်လ်ကာအို (2.8), valerate ့ဂျာမိန်း (1.8) နှင့် Mbappe (1.8) Lemar ရဲ့ 1.7 ထက်ဂိမ်းနှုန်းရည်မှန်းချက်အပေါ်ပိုပြီးရိုက်ချက်များရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီသပိတ်နှင့်အတူချန်ပီယံလိဂ်မှထွက်စပါးခေါက်ဝိုင်းသော 21 နှစ်အရွယ်ခဲ့သတိရပါ။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မိမိခမည်းတော်, ထိ မိ. လဲစရာ Asernal မှရွှေ့
အဆိုအရ GFFN, Lemar ရဲ့အဖေကသူ့ကိုမိုနာကိုမှာနေဖို့ပင် 21 နှစ်အရွယ် 2018 အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်ပြင်သစ်ရဲ့အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်ကောက်ယူရဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စာချုပ် extension ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်လိုသည်။
အဆိုပါကောလာဟလအတွက် 2017 နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ဒါဟာ Edwige အာဆင်နယ် '' ငြင်းပယ် '' မိမိသားကိုလိုချင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ စာအရေးအသား၏အချိန်တွင်အာဆင်နယ်အသင်းဟာစွပ်စွဲ£ 40m တခြားကမ်းလှမ်းမှုပြီးနောက်တောင်ပံကစားသမားတစ်£ 31m လေလံနှင့်အတူမိုနာကိုမှပြန်လာသောပြီးတော့ပုံ 35m £သကဲ့သို့ပြန်ခေါက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့£ 50m အထိသွားကြဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ဟုဆိုသည်ပါတယ်။
အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်; အာဆင်နယ်ကယ့်ကို£ 50m တက်ချောင်းဆိုးမလား - အိုဇေးထက်ပို - သူရာသီအများစုများအတွက်ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကစားသမားများအတွက်?
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:လီဗာပူးလ် Salah Choose အစား Lemar အဘယ်ကြောင့်
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကယ့်ကိုကြိုက်နှစ်သက် Salahဒါပေမယ့်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအအရှိန်အဟုန်၏သူအာကာသရှိပါတယ်တဲ့အခါမှသာသူသည်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ၏ကောင်းသောအလုပ်ကိုအများစုမသတိထားမိတယ်။ သူ Lemar ကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောထိတွေ့မရှိပါ။ သူတို့ဟာ lemar ဘတ်စ်ကားကိုဖြိုအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူကအလွန်စျေးကြီးသောကြောင့်သူတို့ကိုသူ့အဘို့ go မေ့သွားရောမူလတန်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကမိုနာကိုဟာစျေးပေါအပေါ်သူ့ကိုရောင်းဘယ်တော့မှမယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်သူကပိတ်ထားသည်ထက်ဘောလုံးကိုအပေါ် သာ. ကောင်း၏ Lemar နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ Lallana ၏လုံလောက်စွာရှိယုံကြည်ပါတယ် Coutinho, ဂီနီအညွန်းနှင့် Firmino လည်းဘောလုံးကိုအပေါ်ကြီးစွာနေသောသူ။
အဘယ်အရာကိုသူတို့လိုအပျသောဘောလုံးကိုချွတ်နှင့်ကာကွယ်ရေးနောက်ကွယ်မှပြေးစေနိုငျသူအခြားကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ Salah ကြောင်းကောင်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ Lemar သူတို့အားသူတစ်ဦး LW ထက်ပိုကောင်းတဲ့ AM ဖြစ်ပါသည်။
သောမတ်စ် Lemar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:သိအခြားအရာ
Lemar ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်အမြဲ Andres Iniesta ခဲ့, ထိုသို့ပြသထားတယ်။ မိမိအ dribbling ကျွမ်းကျင်မှုထိပ်တန်းရှိပါတယ်နေစဉ်, သူကကာကွယ်စောင့်ရှောက်အပေါ်ယူပြီးနှင့်အတူအစွဲအလမ်းသည်မဟုတ်, အစားအသင်းကိုကစားအပေါ်အလေးပေးတတ်၏။
Adrien Rabiot ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်